खाना पकाउन बिर्सेपछि के भोकै बस्लान् त ब्रिटिशहरू? - Everest Dainik - News from Nepal
खाना पकाउन बिर्सेपछि के भोकै बस्लान् त ब्रिटिशहरू?
२०७५, १० बैशाख सोमबार
आउने दुई पुस्ताभित्र ब्रिटेनका मानिसहरू खाना पकाउन बिर्सिने खानपान विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।
ब्रिटेनमा बढ्दो प्याकेटको खाना खाने संस्कृतिलाई मद्देनजर राख्दै यसो भविष्यवाणी गरिएको हो । विज्ञान लेखिका निकोला टेम्पलले प्याकेटको खानामा लेखेको पुस्तकमा यस्तो आशंका गरिएको हो ।
टेम्पलले पाककलालाई कुनै समय ब्रिटेनमा साह्रै महत्वपूर्ण मानिने सिलाईको सीपसँग तुलना गरेकी छिन् । सिलाईकला आधुनिक मान्छेहरूले बिर्सिंदै गए झैँ पाककला पनि आउने समयमा लुप्त हुने बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस राजमार्गमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु ?
लेखिका टेम्पलका अनुसार ब्रिटेनबासीहरू तयारी खाना खाने गर्छन् र उनीहरूका अनुसार समयाभाव रहेका तर्क दिने गर्दछन् ।
साथै उनका अनुसार मानिसहरूले तयारी खानालाई प्राथमिकता दिनुको अर्को कारण परिवारको महत्व कम हुँदै जानू पनि हो ।
टेम्पलका अनुसार अचेल मानिसहरू परिवारसँग बसेर खाना खानुलाई महत्व दिंदैनन् । अचेल एक्लै बस्ने परम्पराको सुरुवात भयाएक छ । यस्टोमा खान्या पकाउने भण् नालाग्नु स्वाभाविक हो ।
याे पनि पढ्नुस लोभलाग्दो लञ्चः यस्तो छ संसारका चर्चित शहरको खाना ?
एउटा अध्ययन अनुसार ८० र ९० दशकमा जन्मिएकाहरू खाना पकाउने काम प्रति बढी उदासीन देखिएका छन् । अध्ययनले उनीहरूले काम सिक्न समेत नचाहेको बताएको छ ।
ट्याग्स: british, food, packaged food
काठमाडौंको कोटाल टोल सिल
आज ३७८ जनामा कोरोन संक्रमण, ४९९ जना डिस्चार्ज
गृहमन्त्री थापाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ
नेपालमा रहेको कोरोनाको अणुवांशिक अध्ययन सुरु
कस्तो छ आगामी ३ दिनको मौसम?
मलाई ओली समूहमा गयो भन्दा हाँसो उठ्योः हरिबोल गजुरेल